CATV Coaxial Cable ဂီယာထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ | China CATV Coaxial Cable ဂီယာစက်ရုံ
နိဒါန်း ZJ-LE1G-36APP သည် HFC system coaxial ပင်စည်တွင် signal amplification အတွက်သင့်လျော်သော high-gain Bi-directional Line Extender amplifier ဖြစ်သည်။ CTB / CSO စွမ်းဆောင်ရည်သည် 16 dB ပြန်ဆုံးရှုံးမှုနှင့်အတူထူးခြားသည်။ diplex filter ကို၏ကြိမ်နှုန်း optional ကိုဖြစ်ပါတယ်။ AGC / MGC လုပ်ဆောင်ချက်များလည်းရှိသည်။ ဝိသေသလက္ခဏာများ 1. ရှေ့သို့လမ်းကြောင်းအတွက်အသုံးပြု Gallium arsenide အသံချဲ့စက် module ကို။ မြင့်မားသောအမြတ် 36dB; ၂။ ကြိမ်နှုန်းတုန့်ပြန်မှုညှိနှိုင်းမှု plug-in ယူနစ်ကိုထောက်ပံ့ပြီးထိရောက်စွာလျော်ကြေးပေးနိုင်သည်
ထူးခြားချက်များ ၁။ Forward Path ရှိ Enhanced Gallium Arenide (E-GaAs) module များကိုအသုံးပြုသည်။ ၂ ။ ၃ ။ ၄။ ကြိမ်နှုန်း၏ plug ကိုတုန့်ပြန်ခြင်းသည်လျှပ်စစ်ကြိုးကြိုးအားနည်းမှုအားနည်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သောထုပ်ပိုးမှုကိုထိရောက်စွာလျော်ကြေးပေးနိုင်သည်။ ၅။ အပြင်ဘက်သွန်းလောင်းသောလူမီနီယံအိမ်ရာသည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဆင့်မြင့် passivated အပြောင်းအလဲနှင့်နှစ်ထပ်ရေစိုခံနိုင်သည့်ယာဉ်ကိုအသုံးပြုသည်။ ယူနစ်သည်အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးသာမကအိုမင်းခြင်းကိုကာကွယ်ပေးနိုင်သည်သာမကကောင်းမွန်သောဓါတ်ရောင်ခြည်လည်းရှိပြီးကောင်းမွန်သော ... \_ t
လိုင်းတိုးချဲ့ Amplifier ZA-LE1002-S
ဝိသေသလက္ခဏာများ 1. ရှေ့သို့လမ်းကြောင်းအတွက်အသုံးပြု Gallium arsenide အသံချဲ့စက် module ကို။ မြင့်မားသောအမြတ် 36dB; ၂။ ကြိမ်နှုန်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုညှိနှိုင်းမှု plug-in ယူနစ်ဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးထားသည်၊ ကေဘယ်ကြိုး nonlinear attenuation မှရရှိသောခုံးကိုယ်ထည်ကိုထိရောက်စွာလျော်ကြေးပေးနိုင်သည်။ ၃။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဆင့်မြင့် passivating ကုသမှုနှင့်နှစ်လွှာရေစိုခံသည့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုပြင်ပအမျိုးအစားလူမီနီယံသွန်းလောင်းသည့်အကာများတွင်အသုံးပြုသည်။ ချေးခြင်းနှင့်အိုမင်းခြင်းအားခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ အပူလွန်ကဲမှုကောင်းမွန်ခြင်း၊ ရေစိမ့်ဝင်နိုင်ခြင်းနှင့်လျှပ်စစ်သံလိုက် ...
ZA-APP-1.2G Outdoor Amplifier
နိဒါန်း ZA-APP-1.2G သည် HFC system coaxial ပင်စည်တွင် signal amplification အတွက်သင့်လျော်သော high-gain Bi-directional Line Extender amplifier ဖြစ်သည်။ CTB / CSO စွမ်းဆောင်ရည်သည် 16 dB ပြန်ဆုံးရှုံးမှုနှင့်အတူထူးခြားသည်။ diplex filter ကို၏ကြိမ်နှုန်း optional ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ထူးခြားချက်များ ၁။ ရှေ့သို့သွားသောလမ်းကြောင်းအတွက်အသုံးပြုသောဂယ်လီယမ်အာရင်နိုက် amplifier module ။ မြင့်မားသောအမြတ် 38dB; ၂။ Cable nonlinear မှရရှိသောခုံးကိုယ်ထည်ကိုထိရောက်စွာလျော်ကြေးပေးနိုင်သည့်ကြိမ်နှုန်းတုံ့ပြန်မှုညှိနှိုင်းမှု plug-in ယူနစ်ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။
ဝိသေသလက္ခဏာများ●ဂယ်လီယမ် arsenide amplifier module ကိုရှေ့လမ်းကြောင်းအတွက်အသုံးပြုသည်။ 36dB မြင့်မားသောအမြတ်•●ကြိမ်နှုန်းတုံ့ပြန်မှုညှိနှိုင်းမှု plug-in ကိုယူနစ်, cable ကို nonlinear ကို attenuation ကနေရရှိလာတဲ့ဟာခုံးထည်လျော်ကြေးပေးနိုင်စွမ်း။ ●အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဆင့်မြင့် passivating ကုသမှုနှင့်အလွှာရေစိုခံလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအလူမီနီယမ်သွန်းလောင်းသည့်အကာများတွင်အပြင်အဆင်နှင့်အိုမင်းခြင်းမှခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊
တစ်ဖက်သတ် amplifier ZA836-220V
ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် House amplifier (text-amplifier များတွင်) သည် cable TV ကွန်ယက်များရှိ TV signal များကိုချဲ့ထွင်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ အသံချဲ့စက်များကိုလျှပ်စစ်ဓာတ်အား ~ 198-250V နှင့်လိုင်းမှ ၂၄-၆၅ ဗို့ (အမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍) အဝေးမှလျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြည့်တင်းရန်အတွက် built-in ပါဝါထောက်ပံ့မှုဖြင့်ထုတ်လုပ်သည်။ အဆိုပါအသံချဲ့စက်တ ဦး တည်း input ကိုနှစ်ခုရလဒ်များရှိသည်။ အဆိုပါချဲ့စက်များ plug-in ကိုပြန်လမ်းကြောင်းကိုချဲ့စက်နှင့် interstage attenuator များအတွက်ထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်။ Plug-in ကိုပြန်လမ်းကြောင်းလမ်းကြောင်း module တွေအထုပ်ထဲမှာမပါဝင်ပါ။ သတ်မှတ်ချက်များ Ty ...